YAANYO PINK TORBAY F1: SAWIR, ASTAAMAHA, SHARAXAADDA IYO SIFOOYINKA BEERAHA EE KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Cusbileedka xulashada aan qabyada lahayn: Tamaandho kala duwan Torbay F1
Waqtigan xaadirka ah, inuu bannaanka u heli karo noocyo badan oo ganaax ah ee yaanyada, kuwaas oo lagu kala saaro by dhalidda sare iyo dhadhan wanaagsan. Kala sooc "Torbay F1" ayaa dhawaan la duubay isla markaana si dhakhso ah u kasbaday sababtoo ah mudnaantiisa.
"Torbay F1" waxaa loola jeedaa Beelaha. Waxaa la soo saaray geedka reer Holland ee dhowaan, dhawaan 2010, waxaana hadda loo tixgeliyaa mid ka mid ah Beelaha ugu fiican ee yaanyada Rose. Kala sooc horaantii hore, laga bilaabo beeritaanka abuurka ilaa bilowga ururinta ee yaanyada tufaaxa inta badan waxay qaadataa 105-115 maalmood. Waxaa lagu koray dhulka iyo beeraha lagu koriyo.
Ma taqaanaa? Botanistayaasha waxaa ka mid ah yaanyada sida berry, laakiin sannadkii 1893, Maxkamada Sare ee Maraykanka waxay aqoonsatay yaanyada sida khudradda, maadaama loogu talagalay qadada, maaha macmacaanka. Sanadkii 2001, Midowga Yurub wuxuu go'aansaday inuu yareeyo yaanyada sida miraha.
Geedka waxaa lagu kala saaraa cabbiraha heerka (i.e., koritaanka-xaddidan) geed. Its height ee bannaanka u furan yahay 85 cm, laakiin in lagu koriyo ah waxay u koraan ilaa 150 cm.
Iyada oo la kaashanayo liisaska noocyo yaanyo ah ee gobolka Moscow, Ural iyo gobolka Leningrad, waxaad dooran kartaa noocyo kala duwan oo ku habboon in ay ku habboon yihiin xaaladahaaga sii kordhaya.
The "Torbay F1" miraha ku wareegsan yihiin, cufan, wax yar oo qoyan, casaan dhalaalaya. Celcelis ahaan miisaanka miro waa 170 g, laakiin koraa iyo nuqul 250 gram ah. Sida dhammaan yaanyada casaanka, miraha "Torbay F1" waa dhadhanka dhadhanka ka badan midhaha miraha cas. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba isticmaalka cowska iyo in lagu sii wado hawlaha dheeraadka ah (pickles, khudaarta qasacadaysan, casiir yaanyo, suugo, iwm.).
Ma taqaanaa? In ka badan 60 malyan oo ton oo yaanyo ah ayaa sanad walba koray. Hantidhawrka marka la eego wax soo saarka waa Shiinaha (16% wax soo saarka adduunka).
Mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan ee "Torbay F1" waa dhalidda sare. Sida laga soo xigtay sharaxaadda xayaysiinta, iyada oo habka saxda ah ee beerista iyo abuurista xaaladaha ugu wanaagsan laga bilaabo hal baadiyaha waxay heli kartaa ilaa 6 kg oo miro ah. Sidaa darteed, haddii aad u hoggaansantahay inta jeer ee lagu talinayo duurka (4 xabbo 1 kiilo M), ka dibna laga soo bilaabo square square meter waa aragti ahaan suurtagal ah in la ururiyo in ka badan 20 kg oo yaanyo ah.
Muuqaal ka mid ah miraha ka mid ah Beelaha this waa qaabka cufan ee cufan, si ay u dulqaataan gaadiidka si fiican. Haddii ay ka soo baxaan baadiyaha, waxay u bislaadaan dhibaato la'aan inta lagu jiro kaydinta.
Iska hubi noocyo kale oo yaanyo casaan ah: Casaan, Cadaan, Kombiyuutar Pink, Mikado Pink, Abakansky Pink, Flamingo Pink, Pink Elephant, De Barao, Aabaha Qarsoodiga ah, Raspberry Giant "," Jannada Jannada "," Unicum Pink "," Liana ".
Laga soo bilaabo tayada wanaagsan ee hubka "Torbay F1" waxaad tilmaami kartaa waxyaabaha soo socda:
dhadhan fiican ee midhaha;
Bisaylka isku midka ah ee miraha;
caabbinta noocyada kuleylka;
caabbinta wanaagsan ee ku dhowaad dhammaan cudurada dhaqameed ee yaanyada;
miro ayaa loo dulqaadan karaa gaadiidka fog fog.
Xaalad khaas ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ayaa ah baahida loo qabo in kor loo qaado kor u qaadidda xayawaanka yar yar (xakamaynta joogtada ah ee ciidda, waraabinta iyo bacarimid), laakiin sida ay u koraan, baahidani way baaba'daa. In line dhexe, oo leh cimilada qaboobaha, for beerashada guul of this hybrid ee bannaanka u furan waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay hoyga filimada.
Beeraha iyo beeraha
Abuurka geedka waxaa lagu beeray weelasha bisha Maarso ilaa qiyaas ahaan 15 mm, halka heerkulka ciidda uu noqon doono 20-22 ° C. Caleemaha soo baxa ayaa dhashey. Ka dib qiyaastii 30 maalmood, marka aanay khatar u lahayn dhaxan, geedo waxaa lagu beeray dhul furan. Dhab ahaantii, waxay ahayd ciidda bacriminta leh oo leh dareen diidmo oo daciif ah.
Waa muhiim! Ku quudi dhirta hal mar toddobaadkii; quudinta isticmaalka Bacriminta ama Bacriminta dabiiciga ah ee lagu daro biyaha waraabka.
Waxaa lagu talinayaa in la beero wax ka badan 4 busha halkii mitir labajibbaaran. Marka la dillaaco, 10 g oo ah superphosphate waa in lagu daraa dalool kasta oo soo degaya. Iyadoo ay duurka u baxaan, waa in lagu xiraa taageerooyinka. Kala duwan ayaa u adkaysata kuleylka, laakiin si aad u hesho dhalidda ugu fiican, waa in aanad dayacin waraabin joogto ah, taas oo la qaado 2 maalmood oo kasta.
Cudurada suurtagalka ah iyo cayayaanka
Mid ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee Torbay F1 waa iska caabin xoog leh sida cudurrada dhaqameed ee yaanyada sida verticillary dildilaaca, masaaki of yaanyada, kallana xidid, fusarium, cladosporia, nematodes gall, kalluunka apical.
Waa muhiim! Cudur kaliya oo halis gelin kara "Torbiyu F1" waa lugta madow, taas oo saameysa dhirta dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Dhirta cirridka ayaa lagula talinayaa in la burburiyo, goobahana waa in lagu daaweeyaa fungicides.
Markii lagu beeray koriyo, waxaa laga yaabaa in lagu dhufto cayayaan sida cagaarka cagaaran. Xaaladdan oo kale, duurka yaanyo waxaa lagu daaweeyaa cayayaanka. Ka soo horjeeda caarada caarada iyo aphids waxay isticmaalaan biyo saabuun leh. Baradhada baradhada Colorado ayaa la dagaallantay sunta cayayaanka caadiga ah.
Sidaa darteed, hybrid F1 hybrid isku dhafay sifooyin badan oo faa'iido leh - dhalidda sare, dhadhanka wanaagsan ee miraha, iska caabin cudurada - ugu yar ee cilladaha. Tilmaamahan ayaa go'aamiya caan ka mid ah noocyada kala duwan ee yaanyada ee bannaanka.